Isiphephelo saseCerro Castillo
Esiphephelweni sethu esisemnyango we-Cerro Castillo National Park, emkhakheni we-Villa Cerro Castillo, uzoqala usuku lwakho ngesidlo sasekuseni esimnandi futhi maduzane ungakwazi ukujabulela imisebenzi ehlukahlukene yangaphandle, njengokuhamba ngezinyawo, ukugibela amatshe, nokugibela amahhashi. Ngemva kwalokho, ungakwazi ukujabulela ukuphumula okufanele kahle emakamelweni ethu angasese anendlu yokugezela yangasese, inkosi noma umbhede ongashadile, kanye nombono okhethekile womfula oyisono i-Ibañez kanye nohlu lwezintaba zeCerro Castillo it self.
Amakamelo ethu afakwe indlu yokugezela yangasese, ishawa eshisayo, umbhede ongusayizi wenkosi noma imibhede emibili engashadile enobude obungamamitha angu-2, ibhodi lombhede, itafula eliseduze nombhede, amapulagi angu-6 ngekamelo ngalinye, okomisa izinwele, amathawula, iziliphu, ishampu, insipho, iphepha lasendlini yangasese.
Ukusuka esiphephelweni sethu e-Vila Cerro Castillo ungahlela imisebenzi eminingana ngosuku, njengokuhamba ngezinyawo ukuya e-laguna Cerro Castillo noma Neozelandes Valley eCerro Castillo National Park, Ukugibela amahhashi, ukukhuphuka kwamadwala, i-Paredon de las Manos, i-Las Ardillas Scenic Route, iLapparent Lake.
Ngiyatholakala ukuze ngihlanganyele futhi ngihlele imisebenzi ethakaselwayo nabavakashi, ukwazisa ngokudluliselwa kwezinye izindawo nezindlela zokuhamba nolwazi lwezokuvakasha ngokuvamile.